Fetim-bahiny : mpanao rapa-dango ny tanora malagasy | NewsMada
Fetim-bahiny : mpanao rapa-dango ny tanora malagasy
Tsy tokana fa maro ! Santionany ihany ny « Halloween », ho avy tsy ho ela ny « Fetin’ny mpifankatia ». Roboka manao rapa-dango azy ireny ny tanorantsika. Mihazakazaka manatanteraka hetsika izay heveriny fa mifanandrify amin’ireo fetim-bahiny ireo izay afaka manao izany. Fikambanana, orinasa, mpikarakara hetsika kolontsaina, olon-tsotra, samy manindrahindra ireny fetim-bahiny ireny avokoa… Somadodoka sy hiedinedina ery ny tanora malagasy !
Amin’ny lafiny iray, tsy omen-tsiny izy ireo satria tena difotry ny tsy fahalalana. Saingy, amin’ny lafiny hafa indray, tsy ampy fandinihana intsony ny tanora malagasy ankehitriny. Ny antony, na ny teo aloha (ray aman-dreny, mpanabe, mpitondra isan’ambaratongany, sns) no tsy nahatafita izay tokony hampitaina amin’ny fomba malagasy na ny tanorantsika mihitsy no tsy afa-mandray azy ireny intsony fa donton’ny rapa-dango sy menatra ny maha izy ny tena.
Anisan’ny hahazoan’ny firenena iray fandrosoana ny fananana tanora mahay mampifanaraka ny kolontsaina vahiny amin’ny kolontsain’ny taniny.
Une réponse à "Fetim-bahiny : mpanao rapa-dango ny tanora malagasy"
Tsopiaina 28/01/2016 à 10:47
Marina tokoa izany! Saingy inona moa no manakana ny Ray amandReny tsy hampahafantatra ny zanany ny tena mahamalagasy mialoha ny ahalalany ny an’ny hafa? ohatra azo raisina ny taombaovao malagasy : inona no manakana ny Fanjakana tsy hanao azy io ho toy ny fety lehibe ho antsika malagasy rehetra ka hanokanana andro tsy fiasàna raha ilaina ahalalan’ny taranaka azy mandrakizay?